काठमाडौ–कोटेश्वरको बालकुमारी पुलसँगै बहुउपयोगी तारे होटल स्तरको आईसीए ट्रेनिङ्ग सेन्टर संचालनमा आएको छ । सेन्टरले थ्री स्टार होटल स्तरीय सुविधा ननस्टार (न्युन) शुल्क मा उपलब्ध गराउने पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । कम्प्लेक्समा १५ देखि १ सय जनासम्म अटाउने ६ वटा हल छन्...
छैठौं बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी मेला सुरु काठमाडौं- उद्योग राज्यमन्त्री कन्चन चन्द्र बादेले स्वदेशमा उत्पादन भएका नेपाली जुत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली छाला जुत्ता उद्योगलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिस्तरसम्म प्रवर्द्धन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कानुनी तथा कागजी प्रक्रिया छिटो ढंगले...
काठमाडौं। ०७२ को महाभूकम्पबाट मुुलुुकभरका ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भए पनि अहिलेसम्म एक हजार ४९ वटा विद्यालय भवन मात्रै बनेका छन् ।
शैक्षिक संस्था पुुनर्निर्माणका लागि कुुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । भत्केका शैक्षिक संस्था...
ट्यांकरचालकले हडतालको तयारी गर्दा उपत्यकामा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। गत शुक्रबार एक दिन उपत्यकामा इन्धन ढुवानी ठप्प पारेका चालकले माग सुनुवाइ नभए १५ फागुनबाट हडताल गर्ने प्रचार गरेका छन्।
हडतालको त्रासमा उपभोक्ताले बढी इन्धन सञ्चय थालेका छन्।...
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको स्रोत जुटाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिको बैठकले सतलजलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्...
लमजुङ (बेँसीसहर) । गाउँ पुग्ने सडक नभएपछि नाल्माका स्थानीयले ऋण गरेर भएपनि आफैं सडक निर्माण गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम बेँसीसहर–१६ नाल्मा बाख्रेजगतका स्थानीयले रु. १८ लाखको लागतमा बाख्रेजगतदेखि स्यारेसम्मको करिब एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माण गरेको सडक निर्माण समितिका अध्य...
मेलम्ची खानेपानी आयोजना: आउने दसैँमा घर घरै खानेपानी काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेकाले निर्धारित समयमै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण हुने भएको छ ।
“आयोजनाको सुरुङ निर्माण र पाइपलाइन विस्तार द्रुत गतिमा भइरहेको छ, विसं २०७४ साउनमा खानेपानी परीक्षण गरी आगामी बडादसैँमा घर घरमा खानेपानी वितरण...
सुनको मूल्य घट्यो हेर्नुहोस कतिमा हुदैंछ कारोवार ?
आज मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको स्थिर छ । सोमबार प्रति तोला ५५ हजार ६ सयमा कारोबार भएको ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतको सुन आज तोलामा १ सयले घटेर प्रति तोला ५५ हजार ५ सयमा कारोबार भई रहेको छ । त्यस्तै चांदी स्थिर रहदै प्रति तोला ८ सय २० रुपैयाँमा कारोबार...
त्रिबेणी विकास बैंकले काभ्रेपलाञ्चोकको कुन्ताबेशीमा २६ औ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ। २०६८ सालदेखि संचालनमा रहेको एक्सटेन्सन काउन्टरलाई बैंकले शाखा कार्यालयमा रुपान्तरण गरि २६ औ शाखा कार्यालयको रुपमा संचालनमा ल्याएको हो। काभ्रेपलाञ्चोकको महादेविस्थान ८ कुन्ताबेशीमा संचालनमा ल्याइएको...
काठमाडौं – राजधानीको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको मुहार फेरिने भएको छ । अस्तव्यस्त, फोहोर र असुरक्षित मानिने देशकै ठूलो यो बसपार्कलाई व्यवस्थित मात्र होइन, अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन लागिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।
बसपार्कको रेखदेशख तथा व्यवस्थित गर्न महानगरपालिका र लोत्से बहुउद...